जापानमा बिधार्थीहरुले घर सर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरु !!! – NESAJ
१.घर छोड्नु अघि
– घर छोड्ने निर्णय लिई सक्नु भएपछि , कृपया हालको भाडा सम्झौता सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस्, सम्झौता रद्द गर्नको लागि लेखिएको सर्तहरु राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि बल्ल रद्दिकरण प्रक्रिया सुरु गर्नुहोला ।
– कृपया अनुबंधित सेवाहरु जस्तै बिजुली , पानी , ग्याँस र इन्टरनेटलाई बन्द गर्न नबिर्सनुहोला । यससँगसँगै घर छोड्नु अघि घरको अन्तिम महिनाको भाडा तिर्न पनि नबिर्सनुहोला ।
– जापानमा घर सर्दा हजुरले फोहोरको पनि ख्याल राख्नुपर्छ । यदि तपाईले घरको कुनै भाग तोडफोड अथवा फोहोर गरेमा सम्झौता अनुसारको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले घर छोड्नु अघि राम्रोसँग सफा गरेर फोहोर सम्बन्धित ठाँउमा फाले आफ्नो पैसा बचाउन सकिन्छ ।
२.नयाँ घर सर्नु अघि
– घर सर्नु अघि घरको सम्झौता कति बर्षको हो र बीचमा छोडे कति लाग्छ ध्यान दिनुहोला ।
– घर कति बर्ष पुरानो हो ? यसमा पनि ध्यान दिनु होला ।
– डिपोजिड गर्ने पैसा र ग्यारेन्टर कम्पनीले लिने पैसामा पनि ध्यान दिनुहोला ।
-अर्को एकदम महत्वपूर्ण काम चै घरको भित्री भागहरु राम्रोसँग जाँच गर्नुहोला ,पछि घर छोड्ने बेलामा तपाईले पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले राम्रोसँग जाँच गरि घरधनिलाई अथवा घर लिएको कम्पनीलाई पहिलै सुझाव दिनुहोला ।
– तपाईले घर सर्नु अघि हाल तपाई बसी राख्नु भएको ठाँउको नगरपालिकामा गई बसाई सराईको निबेदन भर्नुपर्ने हुन्छ । यो निबेदन भरेपछि तपाईलाई नगरपालिकाले बसाई सराईको प्रमाणपत्र दिन्छ ।
– नयाँ ठाँउमा पुगेपछि त्यस ठाँउको नगरपालिकामा गई तपाईले पाउनु भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र १४ दिन भित्र बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि तपाईलाई तपाईको जाईर्योउ कार्डको पछाडि नगरपालिकाले सोही दिन ठेगाना लेखेर जाईर्योउ कार्ड फिर्ता दिनुहुन्छ ।
नोट – पासपोर्ट , इन्कान र जाईर्योउ कार्ड लिएर जान नबिर्सनुहोला ।
अन्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
– जापानमा स्वास्थ बिमा कार्डको एकदम महत्वपूर्ण छ । तपाईले तपाईसँग भएको स्वास्थ बिमा कार्ड घर सर्नु अघि सोही ठाँउको नगरपालिकामा बुझाउनुपर्छ र घर सरिसके पछि सोही नयाँ ठाँउको नगरपालिकामा गई नयाँ स्वास्थ बिमा कार्डको निबेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निबेदन दिएको एक हप्ता भित्र तपाईलाई नगरपालिकाले नयाँ ठेगना सहित नयाँ स्वास्थ बिमा कार्ड घरमै पठाइ दिनुहुन्छ ।
– नयाँ ठेगाना सँगसँगै तपाईले आफ्नो हुलाक , मोबाइल , बैक र क्रेडिट कार्डको पनि ठेगाना परिवर्तन गर्नुहोला ।
खान्जी पाठ २ – 友 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु
खान्जी पाठ ३ – 話 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु